10-ka Tayo Ee Ay Dumarku Ku Jeclaadaan Ragga, Hadii Aad Leedahay Arimahan, Gabadhuhu Way Isku Kaa Dilayaan. – Allsomali.net | BANAADIRSOM
Home Arimaha Bulshada 10-ka Tayo Ee Ay Dumarku Ku Jeclaadaan Ragga, Hadii Aad Leedahay Arimahan,...
10-ka Tayo Ee Ay Dumarku Ku Jeclaadaan Ragga, Hadii Aad Leedahay Arimahan, Gabadhuhu Way Isku Kaa Dilayaan. – Allsomali.net
Waxa laga yaabaa in ay is waydiiso maxay Dumarku ku jecelyihiin Ragga, sidee ayaad u noqotaa Nin ay gabdhaha oo dhan ka helaan.
Inta badan Ragga Somalida ayaa aaminsan in quruxda iyo Lacagtu tahay waxa ugu weyn ee ay dumarku ku jeclaan karaan Ninka laakiin arintaas run ma ahan.
Hadaba maanta waxa aan Halkan ku soo bandhigi doonaa 10 tayo ama calaamad oo ay dumarku ku jeclaadaan Ragga hadii aad leedahayna ay dumarku isku kaa dilayaan.
Dumarka waxa ay jecelyihiin raga nadaafada badan
Haddii aad Kamid tahay raga nadaafada badan, aan kuu hambalyeyno. Waxaad la jaanqaaday dumarka maanta. Ninka markuu yahay calaf raadis waxaa fiican inuu ka taxadiro nadaafadiisa.
Dumarku waxa ay raga inta badan ka fiiriyaan xaga nadaafada dhan walbaa gaar ahaan qeybaha la arki karo.
Tusaale: kobaha, dharka iyo Cijiyaha, marka ay wasaq ama wax mad madow ah ku jiraan, durbaba waxa ay u fahmayaan inaad tahay nin nadaafad xun.
Sidaa darteed sameey waxyaabahaan si aad u soo jiidato dareenkeeda.
Mari jirkaaga Kareem
Noqo Qof wejigiisu furfuran yahay
Marso Barfuum oo iscarfi
Markaad intaas ka taxadirto waxaad arkeysaa iyadoo isha kula raaceyso.
Dumarka waxa ay jecelyihiin raga u dhoolacadeeyo
Maxay jecelyihiin dumarka? Jawaabta macquulka ah: Raga u dhoolacadeeyo. Dhoolacadeyntu waa qeyb Kamid ah sunada Nabiga SCW.
Waa mid Kamid ah qeybaha ugu muhiimsan ee lagu garto qofka soo jiidashada badan. Markaad dhoolacadeyso waxaad muujineysaa inaa tahay qof saaxibtinimo leh misana la fahmi karo.
Raga xaragada badan
Markaad xarrago badan tahay, kaliya ma noqoneysid nin ka soocan raga kale ee sidoo kale waxaa soo jiidaneysaa dumarka oo idil gaar ahaan kuwo xarragada badan . Alla wiilkaas labiskiisu caadi ma ahan.
Raga aadka u degan
Dumarka marka ay raga ka xulayaaan gayaankooda, waxyaabaha ugu horeeyo ee ay ninka ka fiiriyaan waa degenaantiisa. Haddii aad tahay nin degan, waxaad kamid tahay dumarka raga ay jecelyihiin.
Dumarku kama fikiraan maanta oo kaliya ee waxa ay ka fikiraan beri. Ninka ay noloshooda la dhameysan doonaan inuu ahaado mid degan, xittaa haddii ay wax qaldan sameyaan. Ninku waa in uu ahaadaa mid u dulqaato, qaladkoodana fahansiiyo.
Raga muujiyo rabitaankooda
Waxaad aragtay xabadoo shidan oo sida Kiin Jaamac oo kale ah. Kala Xiran, dhex yar oo macaan leh. Maalin walbaa waxaa la raacdaa isha. Weey ku soo fiirisaa laakin uma sheegan kartid rabitaankaaga, taasi ma ahan wax fiican. Ha sameyn sidaas oo kale.
Dumarka raga ay jecelyihiin waxaa kamid ah ninka muujiyo rabitaankiisa. Nin aanan ka cabsan waxa uu rabo iyo waxa uusan rabin.
Dumarka ma jeclo nin leex-leexad badan oo ka muuqato kalsooni daro. Sidaa darteed noqo nin rabitaankiisa muujiyo.
Raga aan dumarka bahdilin
Waxa ay kuu soo bandhigtay aragti, laakin aragtideeda kuma amaanin. Waxaa tiri „waxaas wax fiican ma ahan“ Dumarka taasi waxa ay u fahmaan in aad bahdileyso oo aadan aragtideeda qiimeyneynin.
Haddii ay aragti kuu soo bandhigto, ixtiraam xittaa haddii aysan ahayn mid qurux badan. Dumarka raga ay ugu jecelyihiin waxaa kmid ah ninka amaano kuna dhiirigaliyo fikradooda.
Raga balanta oofiyo
Dumarka ma jeclo raga aanan balanta oofin. Haddii aad lamanahaaga wax ka balan qaaday u oofi sida ay tahay. Haddii kale waxaa adkaaneyso in ay wax kale kaa rumeysato. Taasina uma wanaagsano xiriirka mustaqbalkiina.
Qofka aanan balanta oofin dumarka oo kaliya ma necbo ee waxaa sidoo kale neceb dadkoo dhan.
Raga aanan dhacdhaca badneyn
Qeybtani waa qeyb aad u muhiim ah. Dumarku kama helaan nin dhacdhac badan oo xabadoo arkaba xabadiisa ah. Hadaladiisu aanan ahayn hadalo miisaaman.
U hadlo sida uu doono. Tani waxa ay sabab u noqoneysaa inaad single sii ahaato. Xabad walbaa liifada kuu gaabiso.
Markaad hadleysid ku hadal, hadalo miisaaman oo aanan qofna wax u dhimeynin.
Raga hadalka macaan leh
Raga ugu soo jiidashada badan waa kuw loogu magac daray shabeel nagood. Markeey hadlaan durbaba dumarka weey u riyaaqaan.
Waxa ay ku hadlaan had iyo jeer hadalo macaan oo dareen leh sida hadaladaan oo kale: Hadalo macaan ah oo xul ah
Raga siiyo mudnaannta koobaad
Dumarka wax ay ka helaan raga siiyo mudnaanta koobaad misana u muujiyo.
Tusaale markaad rabto inaad wax sameyso, ku dheh: Sidee u aragtaa…. ?
Maxaa jeclaan lahayd…?
Previous articleTaallo lagu xasuusto Farmaajo oo laga dhisayo Garoonka Ciyaaraha ee Muqdisho
Next articleXildhibaan Jeesow oo xog cusub ka bixiyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax
Diyaaraddii sidday Fahad oo dib ugu laabatay Istanbul & Wararkii ugu...
Man City Oo Jabinysa Kale Premier League Kulanka Southamptona Ee Maanta....
Beesha caalamka oo qoraal kulul kasoo saartay khilaafka Farmaajo iyo Rooble